India isonye na China machibido ego crypto niile nkeonwe
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » India na -agbasa ozi ọma » India isonye na China machibido ego crypto niile nkeonwe
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • India na -agbasa ozi ọma • investments • News • ndị mmadụ • Ịrụ ọrụ • Safety • Technology • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a
India isonye na China machibido ego crypto nkeonwe
A kagburu mmachibido iwu India gara aga na cryptocurrency n'April 2020, na-eduga n'ahịa cryptocurrency na-eto eto.
Iwu ọhụrụ nke ga-emepụta usoro maka iguzobe ego dijitalụ gọọmentị yana 'machibidoro ego crypto niile nkeonwe na India' agbakwunyela na atụmatụ na-abịanụ nke ndị omeiwu India.
Atụmatụ machibido ego crypto niile nkeonwe bịara ụbọchị ole na ole ka nke ahụ gasịrị Onye isi ala India Narendra Modi rụrụ ụka ihe dị ka bitcoin nwere ike ejedebe na 'aka na-ezighị ezi ma 'na-emebi oge ntorobịa anyị.'
Ndị Lok Sabha, onye so na ya kwuputara atụmatụ ọhụrụ taa IndiaỤlọ ndị nnọchiteanya. Ọ ga-abụ na atụmatụ ụlọ omebe iwu mgbe ọ ga-ezukọ maka nnọkọ oyi na Nọvemba 29.
IndiaA kagburu mmachibido iwu cryptocurrency gara aga na Eprel 2020, na-eduga n'ahịa cryptocurrency na-eto eto. Ọ bụ ezie na enweghị data gọọmentị dị, atụmatụ ụlọ ọrụ nke Reuters kwuru na-etinye ọnụ ọgụgụ ndị na-etinye ego na crypto na India n'etiti nde mmadụ 15 na 20, nwere ihe ruru ijeri rupee 400 ($ 5.4 ijeri).
Gọọmentị etiti New Delhi enwechaghị ịnụ ọkụ n'obi, agbanyeghị. Izu gara aga, PM Modi kwuru na ọ dị "ihe dị mkpa na mba niile nke onye kwuo uche ya na-arụkọ ọrụ ọnụ" na cryptocurrencies dị ka bitcoin, na "hụ na ọ naghị ejedebe n'aka ọjọọ, nke nwere ike imebi ntorobịa anyị."
Centrallọ akụ etiti nke India ekwupụtala "nchegbu siri ike" gbasara ego crypto nkeonwe dị ka bitcoin ma ọ bụ ethereum, wee kwuo na June ọ na-arụ ọrụ na ego dijitalụ nke ya, nke a ga-ewebata na njedebe nke afọ.
China amachibidoro bitcoin nke ọma na Septemba, na-amachibido ọrụ azụmaahịa metụtara crypto niile n'ụlọ yana machibido mgbanwe mgbanwe mba ofesi na ndị na-etinye ego na-azụ ahịa.
Ka ọ dị ugbu a, mba Central America nke El Salvador ekwupụtala nrịanrịa nke iwu bitcoin n'akụkụ dollar US, ma guzobe ụlọ ọrụ Ngwuputa crypto nke sitere na ike geothermal sitere na ugwu mgbawa.
Ọstrelia na-emepegharị maka ndị ọbịa South Korea gbacharala ọgwụ mgbochi